Kuklomeliswe abafundi eMthethomusha | News24
Kuklomeliswe abafundi eMthethomusha
PHOTO: nokuthula khanyile Uthishanhloko waseMthethomusha uMnuz Msizi Gumede, Umhloli uMnuz Mfanafuthi Thango, Wendy Ngcobo behalalisela umfundi kaGrade 5 u-Olwethu Shabane ongomunye wabaphumelele ngamalengiso.
ISIKOLE samabanga aphansi uMthethomusha kwaMachibisa siklomelise abafundi abenze kahle emcimbini obuhanjelwe abazali kanye nothishanhloko bezikole ezahlukene ngoLwesine olwedlule.
Kulomcimbi waminyaka yonke kunikwe abafundi izindondo kanye nezitifiketi ngokuphumelela ngamalengiso ezifundweni ezahlukene.
Ekhuluma kulomcimbi uSihlalo wesigungu esengamele isikole uMnuz Stanza Zuma ugqugquzele abafundi ukuthi baqhubeke baziphathe kahle nangonyaka ozayo.
“Njengesigungu esingamele isikole sithanda ukubonga othisha ngokusebenza ngokuzikhandla ekufundiseni abantwana bethu, sisebenzisana kahle nabo njengabazali. Sithanda ukunxusa nabanye abazali ukuthi badlale indima yabo uma izingane zifika emakhaya bahlole umsebenzi wazo wesikole futhi bazigqugquzele ukuthi zifunde. Kunina bafundi okubalulekile ukuthi nifunde futhi nihloniphe othisha ngaso sonke isikhathi,” kusho uZuma.
Uthishanhloko waseMthethomusha uMnuz Msizi Gumede ubonge abazali ngokubethemba ngomsebenzi abawenzayo.
“Siyabonga ukuthi niletha abantwana benu lapha ngoba nisethemba. Sichitha isikhathi esiningi nabo, sibonga ukuthi nisethembe futhi siyazibophezela ukuthi sizobakhulisa bagcine kusasa beyinto ekufanele babe yiyo.”
Umhloli weCircuit yase Mbali uMnuz Mfanafuthi Thango ukhuthaze abafundi abangazange baklomeliswe ukuthi baqhubeke nabo basebenze kanzima.
“Nasemjahweni asingeni sonke entambeni ngakho ningadikibali kodwa nani sebenzani ngokuzikhandla ukuze ngonyaka ozayo uma kufika lesikhathi amagama enu ezobizwa. Labo abaya kwezinye izikole ngonyaka ozayo kufanele baqhubeke bamele uMthethomusha ngendlela abaziphatha ngayo nangenhlonipho. Bangafiki ezikoleni zamabanga aphezulu bese beqala benza izinto ezingalungile ngoba ngeke bafinyelele ebangeni leshumi.”
UThango uncome othisha ngokubekezela yize bebuye babhekane nobunzima emsebenzini wabo.
“Sithanda ukubonga othisha futhi sibazise ukuthi kubo bonke ubunzima abazithola bebhekene nabo umnyango ungemuva kwabo. Sicela baqhubeke basebenze ngenhlonipho nothishanhloko kanye nazo zonke iziphathimandla zesikole. Kubazali sicela nabo badlale indima yabo bahambele imihlangano yesikole ngoba isikole sakhiwa yibo. Ukuze isikole sithuthuke siye phambili kufanele abazali bafake uvo lwabo isikole siqhube siye phambili.”